छिमेकी सरसंग चिकाउंँदा - Nepali Sex Tube
छिमेकी सरसंग चिकाउंँदा
तर केटाहरू पनि चिक्न पाएपछी त के कुनै हल्ला गर्दैन अनि त आहा कति मोज।कसैले थाहा पनि नपाउने आफुलाई मज्जा पनि हुने।तपाईं पनि यहीँ आइडिया लगाएर चिकाउनु होला है साथीहरू जून आइडिया यसप्रकार छ। कुरा के थियो भने मेरो घर नजिकै एकजना छिमेकी थियो।उहाँ पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामी राजन सर भनेर बोलाउथ्यौँ।उहाँ पनि त्यस्तै भर्खर 25/26 वर्ष जतिको देखिनुहुन्थ्यो। मैले अघि नै भनिसकेंको छु कि मेरो पुता बेला बेला सन्किन्थ्यो। त्यस्तै एकदिन मेरो मनले एउटा पाप सोच्यो। यो राजन सर संग चिकाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।एक मनले डर पनि लाग्यो अर्को मनले भन्यो आ…… जे सुकै होस यस्तो पाप साप सोच्यो भने बुढा र बुढी पनि गर्न भएन नि ।अनि फेरि मनले सोच्यो आ…… जे होला होला एकपटक त त्यो सरको लाडो मेरो पुतीमा हाल्नै पर्छ। फेरि अर्को मनले सोच्यो ए त्यस्तो गर्न त त्यो सरसंग साइनो पनि मिल्दैन ।त्यो सरले त मलाइ सानिमा पो पर्छ । फेरि यस्तै सोच्दै थिए लौ सानिमा त होइन पो क्यारे नत्र किन त्यो सरको दाईले हाम्रो ठुलोबाको छोरी लगेको त ? ए पहिले पहिले7पुस्ता अघिको हाम्रा बाजेहरुको साइनो पो हो क्यारे । ए पहिले पहिले त्यसै हाम्रो बा आमासंग कुरा गर्ने निहुमा अर्कै साइनोले बोल्नुभएको रहेछ।नयाँ साइनो गाँस्न जति भने पनि मिल्ने भएर नै क्यारे हाम्रो ठुलोबाको छोरी त्यो सरको दाइले लगेको।कुटुम्बको साइनो नै रहेछ ।जे भने पनि मिल्ने म त उहाँको दाइको साली पो हुँ।कस्तो बिर्सेको । ए भिनाजुको त भाइ पो हो । भिनाजुको भाइसंग त मोज गर्नै पर्यो नि। तर त्यो भिनाजु त्यो सरको आफ्नै आमाको छोरो भने होइन त्यो सरको बुबाले दुइटा बिहे गर्नु भएको रहेछ जेठी पट्टिको चाहिँ त्यो भिनाजु कान्छी पट्टिको चाहिँ त्यो सर हो।फेरि अर्को मनले सोच्यो यस्तो साइनोहरु हेर्न थाल्यो भने त आफू जन्मेको प्वाल पनि देखिन्छ नि।यस्तै यस्तै सोच्दै म त्यो सरसंग sex गर्ने निधो गरें।त्यो त ठिक सोचें तर अर्को समस्या फेरि के छ भने पेटमा बच्चा बस्यो भने के गर्ने ?पेटको बच्चाको कारणले कि मर्नुपर्छ कि त्यही सरलाई पोइल जानुपर्छ कि त्यही बेला अरु नै मन पर्ने कुनै मान्छेले लैजानुपर्छ । कस्तो झ्याउ भने के गर्ने के गर्ने ? चिकौं भने यस्तो डर इज्जतै जान पनि सक्छ नचिकौं भने यहाँ मेरो पुती चिलाएर उल्खा हुन्छ हत्तेरी ।
फेरि अर्को कुरा त्यो सरलाई त फास्लाङ फुस्लुङ गरि फकाएर चिक्न लगाउला त्यस्तो सोझो मान्छेलाई कसरी ताल पार्नुपर्छ त्यो त मैले जानेको छु।तर फेरि पेटमा बच्चा बस्यो भने त्यो सरलाई म कसरी पोइला जाने त्यो सरको बुढीले थाहा पाई भने त मार्छ झन पोइला जाने कुरा कसरी सोचौं? त्यो सरको पहिला नै बिहे नभएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो कुनै डर नहुने थियो पेटमा बच्चै बसे पनि नो टेन्सन। त्यही सरलाई पोइला जान पाउथें। तर अब चाहिँ त्यो सरलाई गएर के काम ?सौताको मुनी परिन्छ। थुक्क मेरो भाग्य !!! अरु नै केटालाई चिकाउन लगाउं भने त्यो सर जतिको भर पर्दो मान्छे नै छैन बेकार नराम्रो हल्ला मात्र गर्छ तर त्यो सर त त्यस्तो अरुलाई नचाहने कुरा गरेर हिड्दैन।।त्यही हुनाले चिक्नु त त्यही सर्संग नै चिक्नुपर्छ आ…. जे सुकै होस । कति दिन सम्म यसरी पुती चिलाएको खपेर बस्ने ? बरु पेटमा बच्चा नबस्ने जुक्ति चाहिँ गर्नु पर्ला। फेरि मैले सोचें मेरो पल्लो गाउँको साथी रविनाले त मेडिकलको पसलमा ईकोन भन्ने चक्की पाइन्छ चिकेपछी त्यो2चक्की खायो भने बच्चा हुँदैन भन्थ्यो। त्यो ईकोन भन्ने चक्की नपाए कन्डम भए पनि भैहाल्छ ।बरु यो सामानहरु चाहिँ जुटाउनु पर्यो।यस्तै सोच्दै एकदिन म चुरा लगाउने निहुँ पारेर बजारतिर गएं। बजार पुगेपछि मैले 1 दर्जन चुरा किने त्यसपछि म मडिकल अर्थात औसधि पसलमा गएं। शुरुमा त कसरी मागौ जस्तो भएको थियो तर पसल पुगेपछि पसलेले के चाहियो भन्यो मैले पनि अलि लजाए जस्तो गरि आँट निकालेर भनें। साहुजी ईकोन छ? पसलेले भन्यो छ । अनि मैले त्यहाँ 1 पाक्ट ईकोन किने त्यसपछि फेरि6पाकेट कन्डम पनि किनें ।अनि घर आए ।
अब कसरी राजन सरको लाडो जालमा पार्ने?अब राजन सरको मोबाइल नम्बर खोज्ने काम गर्नु पर्छ भनी उहाँको बुढिलाई सरको नम्बर सोधें। उहाँको बुढिले मलाइ नम्बर दिई त्यसपछी मैले सरलाइ हाइ के छ भनी SMS गरें । उहाँले को भनी कल गर्नु भो हाम्रो SMS बाट कुराकानी हुन थाल्यो । त्यसपछी सरलाई मैले एउटा SMS पठाएं।सर मलाई एक चिज दिनु ल । सरले रिप्लाई गर्नुभो क चिज ?अनि मैले भने त्यो क्या। फेरि सरले रिप्लाई गर्नुभो के चिज ?मैले भने तपाईंको त्यो ।सरले सोध्नुभो के त्यो? मैले भने आफै बुझ्नुस् ।अनि मैले थोरै आँट निकालेर SMS गरें तपाईंको त्यो लामो क्या । सरले बुझ्नु भएछ मलाइ फेरि बुढिले मार्ला भनी रिप्लाई गर्नुभयो ।अनि मैले भने म कसैलाई भन्दिन नि तपाईं पनि नभन्नु ल भनें। त्यसपछी हामी SMS बाट फोहोर कुराहरू सेन्ड गर्न थाल्यौं।कहिले म पुती चिलायो आउ मलाइ चिक भन्थे कहिले सरले मेरो लाडो ठन्क्यो भनी SMS गर्नु हुन्थ्यो यसरी SMS बाट कुरा गरेर मैले र सरले मज्जा लिन्थ्यौ ।
यसरी नै हामी चिक्ने कुरा पनि गर्यौं। चिक्नको लागि ठाउँ पनि तोकियो । त्यो दिन मलाइ अझै याद छ भदौको 20 गते। त्यो दिन चिक्ने दिन निधो गरे SMS बाट नै । मनभित्र कस्तो कस्तो लाग्दै थियो ।तर म ढुक्क थिएं किनकि म संग कन्डम र ईकोन थियो। चिक्ने ठाउँ पहिले हामी स्कुल जाँदा बाटोमा पर्ने जङ्गल SMS बाट निधो भयो। म तोकिएको टाइममा त्यो वनमा पुगे अनि सरलाई कल गरें एकछिन पछि मलाई खोज्दै सर आइपुग्नुभो । मलाई लाज लाग्यो ।किन लजाएकी भन्दै सरले मलाई गालामा किस गर्नुभो ।मेरो जिउमा करेन्ट लागे जस्तो भो। त्यस्पछी हामी अंगालो मारेर जिस्किने र खेल्ने गर्न थाल्यौं। सरले मेरो दुध च्याप्प समात्नु भो म आनन्द मानेर बसेकी थिए।सरले त मेरो बोडिस भित्र हात हाल्नु भो अनि मेरो दूध माड्नु भो मलाइ मजा भयो सरले मेरो लप्सिको गेडा जत्रो ठोसा भएको मेरो दुधको कालो थुनको मुन्टा वरिपरि चलाउनु भयो मलाई झन मज्जा आयो त्यसपछि म त पागल भएर आ…अ…अ…आ….गर्दै कराएं। अनि सरले मेरो बोडिस खोलेर एकातिर मिल्काउनु भयो ।म पागल्जस्तै भएको थिएं । अनि सरले मेरो कुर्ता फुकाल्नु भयो। अब मेरो जिउको माथिल्लो भाग नाङ्गै भयो। लान्द्रुङ लुन्द्रुङ मेरो दुधको पोका मात्र झुन्डिएको थियो। सरले झन माड्नु भो । सरले त्यसपछि मेरो दूध चुस्नुभ्यो ।मलाई त कस्तो कस्तो भयो। चिलाएको त खप्नै नसक्ने भयो। मेरा पुतीबाट पानीको मूल फुट्यो मेरो पेन्टी नै च्याप च्याप भयो।
मेरो त केही होस नै रहेन। मेरो मुखबाट अ..अ…य…य….य…..य….. मात्र निस्क्यो। सरले अझै मलाइ खेलाउनु भयो। मेरो दुधलाई मालाक मुलुक पार्दा त कस्तो आनन्द आउने सम्झेर साध्य छैन। मेरो त्यो2पोका चुसेपछी सरले मेरो पेटतिर किस गर्दै I love you. भन्दै नाइटो वरिपरि हातले खेल्नु भयो। म भने सरले कहिले चिक्ला भनेर पर्खेर बसेकी थिएं। त्यसपछि सरले मेरो सुरुवाल खोल्नु भयो।अब त म नाङ्गै जस्तै भयो। लुगाको नाममा एउटा पेन्टी मात्र थियो। मेरो पुति भने चिलाएर उल्खा भैसकेको थियो पुतीबाट झोल बगेको बगेकै थियो। पेन्टि भिजेर ल्याफ्ल्याफ भैसकेको थियो। म कराएं।फक मी फक मि। fuck me fuck me ओ या..ओ..य…@य..या…. फक मि अर्थात मलाई चिक ।मलाई चिक छिटो चिक छिटो भन्या छिटो चिक फक मि Fuck me प्लिज छिटो मलाई चिक। सर भने अझै मेरो पुतीलाइ पेन्टी बाहिरबाटै खेलाउदै हुनुन्थ्यो। सरले पेन्टी बाहिराबाटै मेरो पुतिलाइ सुम्सुम्याउनुभयो। म भने पुरै सिक भैसकेको थिएं। म मेरो पुतीमा सरको लाडो हाल्न चाहन्थे ।त्यही भएर मैले सरको लाडोलाई पाइन्ट बाहिरबाटै छामेको त सरको लाडो त फलामको रड जस्तो पो ठाडो भैसकेको रहेछ। अनि मैले सरको पाइन्टको चेन खोलें।त्यसभित्र सरको रातो कट्टु रहेछ।अनि कट्टु बाहिरबाटै मैले सरको लाडोलाई खेलाएं। त्यसपछि मैले सरको पाइनट खोलेर मिल्काइदिएं ।
सर पनि मेरो पेन्टी बाहिर बाट पुती खेलाउदै हुनुहुन्थ्यो तर अब भने सरले आफ्नो हात मेरो पेन्टी भित्र हाल्नु भयो र मेरो पुतीको टुप्पोको टिसि खेल्न थाल्नुभो मलाई त झन अच्चम्मसंग पुती चिलायो। म फेरि अ.. आ.. अ… अ… भनी कराएं।मैले पनि सरको कट्टु भित्र हात हालेर बेस्सरी सरकी लाडो समातें।त्यसपछि मैले सरको लाडोलाइ हातले खेलाएं।सर पनि मज्जा मानिरहुनुभएको थियो। सरले अब भने मेरो पेन्टि पनि फुकाल्नु भयो। अब म त पुरै नाङ्गो भएं।म पनि के कम त्यसपछि मैले सरको लाडो खेलाउदै गरेको हातले सरको कट्टु फुत्त फुकालेर भुइँमा फाले । अब दुबै जना नाङ्गै भयौं।
अब त सरले गर्नु हुन्छ भनेको त सरले त मेरो पुती देख्ने बित्तिकै मलाई किस गर्दै टाउको तल तल ल्याउनु भयो। र पुतीलाई ल्याप ल्याप चाट्नु भयो। पुतीबाट आएको रसलाई घुटुक घुटुक निल्नुभयो। मलाई त कति मज्जा भयो भयो भनेर साध्य नै छैन । म कराएं य.. या….या…ओ…या….या…..। सरले आफ्नो जिब्रो पुतीभित्रै घुसारेर ल्याप ल्याप चाट्नु भयो। मैले भनें मलाई त पुग्यो। भयो अब त बस पुग्यो। सर भने अझै मलाई चाट्दै हुनुहुन्थ्यो ।मलाई भने मज्जा भैरहेको थियो। मैले एकहातले सरको लाडो खेल्दै थिएं। अनि सरले अब भने चाट्न छोड्नु भयोआफ्नो लाडो मेरो पुतिमा हाल्ने तयारी गर्नुभयो। म भने कराइरहेको थिएं फक मि मलाइ चिक fuck me ।मेरा पुतीबाट ह्वाल ह्वाल पानी आइरहेको थियो। पुती झन चिलाइ रहेको थियो। त्यसपछि सरले ओके आइ फक यु Ok I fuck you भन्दै मेरो पुती सिधा आफ्नो लाडो पारेर एक धक्का लगाउनुभयो। मलाई रनक्क दुख्यो र म डल्लो भएछु। अनि सरले फेरि एक झड्का लगाउनु भयो ।यश पटकमा मेरो दुखाइ सब चट गयो। दुखाई हरायो। अब मलाइ मज्जा आउन थाल्यो। म पनि मुनिबाट बल गरेर उचाल्दै थिएं। सरले पनि बल गरेर माथिबाट पेल्दै हुनुहुन्थ्यो ।
सरको लाडो भित्र बाहिर गर्दै थियो। अनि प्ल्यात प्ल्याट आवाज आउदैं थियो।मलाई मज्जा भैरहेको थियो । म य..य..या…ओ ….या….या….. भन्दै थिएं ।त्यस्तै 20 मिनेट पछि अचानक मेरो पुती चुमुक चुमुक गर्यो र थोरै पानी फाल्यो त्यसपछि मलाई पुग्यो। ओहो चिक्दा यति धेरै मज्जा म सोच्दै थिएं ।त्यही बेला सरको लाडोबाट पिचिक पिचिक गर्दै मेरो पुती भित्र लाडोको झोल फाल्यो मलाइ पनि त्यो तातो झोल क्या मज्जा भयो । मैले पहिलो पटक यसरी त्यो सरसंग चिकेर मज्जा लिएं। त्यसपछि हामिले आआफ्नो सामान पुछ्यौ र लुगा लगाएर घर तिर फर्क्यौं ।म घर आएर2चक्की इकोन खाएं। त्यसबेला देखि त्यो सर र म बेला बेलामा चिक्छौं। मैले किनेको कन्डम पनि त्यो सर्संग चिकेर नै सकाए। अचेल त सर आफैले कन्डम ल्याउनु हुन्छ । हामिले कहिले मेरो घरमा कोहि नहुदा कहिले सरको घरमा कहिले वनमा कहिले मेरो गोठको चोटामा गरि धेरै ठाउँमा धेरै चोटि चिकी सक्यौ। कहिलेकाही त म बेलुकी पहिले सरलाइ SMS गर्छु र अनि सर बाहिर निस्कनुभै फोन गर्नु हुन्छ अनि म दिशा गर्न जाने निहुँ गरि बाहिर गएर म हाम्रो गोठको चोटामा जान्छु र एकछिन पछि सर आउनु हुन्छ र त्यही चिक्ने खेल खेल्छौ। । कस्तो लाग्यो मेरो चिकाउने आइडिया ???
ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा